Imaaraatka oo Soomaaliya u soo iibsaday duuliyayaal iyo ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah (XOG) - Caasimada Online
Home Warar Imaaraatka oo Soomaaliya u soo iibsaday duuliyayaal iyo ciidamo calooshood u shaqeystayaal...
Imaaraatka oo Soomaaliya u soo iibsaday duuliyayaal iyo ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah (XOG)
Hargeysa (Caasimada Online) – Dawladda Imaaraat-ka carabta ayaa la xaqiijiyay inay soo kireysatay duuliyeyaal calooshood u shaqeysteyaal u dhashay dalka South Africa.
Dowlada Imaaraat-ka ayaa duuliyayaashaasi u adeegsaneysa duqeynta ciidamada Xuutiyiinta ee dalka Yeman kadib la wareegidooda madaarka Berbera ee Somaliland.
Duuliyayaasha Imaaraat-ka ay kasoo kireysatay dalka shirkad laga leeyahay dalka South Africa ayaa tirro ahaan dhan 4 duuliye kuwaa oo laga howlgalin doona Saldhiga Berbera iyo kan Isbaheysiga Sacuudiga ee ku yaala dalka Yemen.
Duuliyayaasha calooshood u shaqeystayaasha ayaa si rasmi ah uga howlgali doona Saldhiga Berbera, balse waxa ay hadda si KMG ah uga sii shaqeyn doonaan Saldhiga isbaheysiga ee Yemen.
Duuliyayaasha calooshood u shaqeystayaasha oo ay soo kireysatay Imaaraadka ayaa waxaa la socda ciidamo gaara oo ay leedahay shirkadda Saracen International ee laga leeyahay dalka Koonfur Afrika.
Imaaraat-ka ay Saracen qandaraas ku siisay diyaarinta ciidamo iyo duliyeyaal calooshood u shaqeysteyaal ah oo ay u adeegsadaan dagaalka Yeman ka socda, waxa ayna wargeysyadu qoreen in shirkada Saracen ay wareejisay duuliyayaasha iyo ciidamada.
Dowlada Imaaraadka carabta ayaa si KMG ah ugu sii shaqeyn doonto qeyb kamid ah Saldhiga Berbera oo si hordhac ah loo hagaajiyay, waxa uuna ujeedku yahay in dalkeeda ay kasoo fogeyso dhibaatada uga imaankarta Xuutiyiinta.
Dhinaca kale, Xukuumada Somaliland ayaa horaantii bishii September 2016-kii Imaaraadka u saxiixday heshiis u saamaxaya inay saldhig Milatari ku yeelato Berbera.